Miady Ho Fiarovana Ny Honko Lalainy Ny Fokonolon’i Cancun, Meksika · Global Voices teny Malagasy
Miady Ho Fiarovana Ny Honko Lalainy Ny Fokonolon'i Cancun, Meksika
Voadika ny 26 Avrily 2016 9:39 GMT
Mpifankatia mankafy ny Tajamar Malecón. Saripika: Danica Jorden..
Manavatsava ny helodrano hatreo amin'ny efitra fandriambahiny mamirapiratry ny distrika, matetika ny mponin'i Cancun no mankafy ny fialana sasatra sy fakana tsio-drivotra eo amin'ny malecón an'ny tanàna, malecón no iantsoan'i Amerika Latina ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina. Amin'ny takariva manavaka azy no ahitanao ny olona manao hazakazaka madinika, milalao, mampilalao alika na mba miresadresaka fotsiny miatrika ny rivotra mangatsiatsiakan'i Karaiba. Hatramin'ny 16 Janoary lasa teo dia nisy alan-konko matevina mizotra mankany amin'ny malecón an'i Cancun, manasaraka ilay lalana fizorana milamina amin'ny tanàna maresaka. Saingy tamin'ny roa maraina tamin'io alahady io, nahetsika ny bulldozers ary nanongotra ireo hazon'ny alakonko, nandrava ny toerana maitso tena ilain'ny mponina indrindra sy namotika ny fonenan'ny zavamananaina an'arivony.
Taitra tamin'izany toe-javatra izany ny mponin'i Cancun, ary nihetsika hiaro sy hamerina amin'ny laoniny izay sisa tavela tamin'ny alan-konko. Nandeha haingana dia haingana ny fanentanana tao amin'ny media sosialy, indrindra fa tamin'ireo pejy Facebook Salvemos Manglar Tajamar (Andao vonjena ny Honkon'i Tajamar) sy ny Guardianes del Manglar Cancún (Mpiambina ny Honkon'i Cancun), ary toy izany ihany koa ny Twitter, novalian'ny fokonolona haingana ny antso, nitarika tany amin'ny fifandraisana tamin'ny Greenpeace sy ireo tambajotra iraisampirenena hanavotana ireo alan-konko manerana izao tontolo izao.
Andro aman'alina ary hatramin'ny 16 Janoary, nanao andrimasom-pokonolona tambanin'ny tranolay miloko manga sy fotsy, akaikin'ny labasy voaloko ahitana hazon-konko goavana mamihina ny tany amin'ny alalan'ny fakany ny Guardianes del Manglar. Fonenan'ny biby, ary tafiditra amin'izany ny mamba lehibe mahamiran'endrika ny mponina sady tafiditra endriky ny fomba fijerin'ny Maya ny tontolo ny Honkon'i Tajamar.
Famariparitana “Hosodoko vita tanana” ny hazo honko teo anoloan'ny fiara voalohany miantsona hisorohana ny fidiran'ireo fiarabe sy milina goavana ao amin'ny Honkon'i Tajamar. Saripika: Danica Jorden
Fefy tariby no manodidina amin'ny ampahany ilay toerana mitovitovy amin'ny toera-panorenana mikorontana, feno hazo mihongakongana, dobo (rano mihandrona) ary ny sisa tavela amin'ireo fitaovana izay lazaina fa “tôksika” ny sasantsasany.
Tao anatin'ny aizana mialoha ny fiposahan'ny masoandron'ny 16 Janoary, niditra tao amin'ny faritra ny bulldozers, faritra noheverina fa narovan'ny lalàna meksikana, nanongotra ireo alan-konko fotsy tsy fahita sy nandrava ny fonenan'ny zavamananaina an'arivony. Nahitana sisam-boay voatapatapaka [Fampitandremana: Sary manohina] hatrany tao ny andro sy ny herinandro nanaraka izany, raha voaosy sy voalevim-belon'ireo milina be kosa ireo biby hafa.
Tanora mitsangatsangana akaikin'ny Honko Tajamar nopotehina. Saripika: Danica Jorden
Natao teo ambany fiahian'ny Vatsim-Pirenena Hampivelarana ny Fizahantany ao Meksika, na FONATUR, ny fanapotehana ary ny polisy federaly no miasa amin'ny fiarovana ilay bemidina.
Fefy miaro ny sisa amin'ny Honkon'i Tajamar, mbola ahitana ny sisan'ny lamba plastika. Saripika: Danica Jorden
Amin'ny maha-toerana maitso sisa tavela ho an'ny mponin'i Cancun miaina ao anatin'ny toerana mihamafana sy mihahenika vatosokay [beton], dia tsapa avy hatrany ny famoizana ny Honkon'i Tajamar ary nihetsika avy hatrany ny olom-pirenena : nitarika ny fanentanana tao anatin'ny hamehana ny tanora nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana, hampitsaharana ny asan'ireo mpampivelatra toekarena. Nahavita nandresy lahatra ny mpitsara tamin'ny fampiatoana ny fandravana ny olom-pirenena sy ny vondro-tanora tamin'ny fanononana ny lalàna meksikana sy ny lalana iraisampirenena mandrara tanteraka ny fandravana ny honko.
Talohan'ny 20 Janoary — efatra andro monja mialoha ny fandravan'ny bulldozer voalohany — namoaka didy manohitra izay mety ho fampivelarana hafa ny fitsarana, niditra tao ny Mpiambina ary napetraka ny fefy. tamin'ny voalohany ny fefy nosaronana lamba pilasitika mainty, saingy norovitin'ny mpikatroka izany ho mora hanaraha-maso ny faritra sy hiantohana ny fiarovana azy. Hatramin'ny nisian'ny didy, dia tonga amin'ny kizo ny toe-draharaha, manara-maso akaiky ny toerana ny fokonolona manamarina fa tsy nisy zava-nitranga nandritra ny alina.
Anjara fotoanan'ny Atrikasan'ny Dihy Salsa Mahery amin'ny fiambenana ny Honko Tajamar sady mianatra dihy ihany koa mandritra izany fotoana izany. Saripika: Danica Jorden
Rehefa nanontaniana ny fijery ny honko ireo tanora mpikambana ao amin'ny atrikasa Dihy Salsa Mahery, dia nanomboka nihetsiketsika nientanentana sady niara-nihiaka hoe:
¡Era HERMOOSA! ¡Muy grande, muy verde!
TSARA dia TSARA ilay izy! Lehibe tokoa, maitso tokoa!
Miaro sy manitatra ny morontsiraka ny honko. Araka ny Coastalcare.org, “ny tombontsoa lehibe indrindra avy amin'ny alan-konko dia ny fahafahan'izy ireo mampihena ny fipongaran'ny tadio”. Olana goavana izany fahaverezan'alan-konko izany ho an'ny faritra toa an'i Cancun mora andalovan'ny rivodoza [hurricanes], izay efa noravaravain'ny Hurricanes Gilbert tamin'ny 1988 sy Wilma tamin'ny taona 2005 — ary tsy ho an'i Meksika ihany — miantraika amin'i Amerika, Azia Atsimo, Aostralia, Nosy Pasifika ihany koa; ny maro dia amin'ny firenena maro dia maro manerana izao tontolo izao. Ilaina tokoa ny honko mbola tavela, fa matetika ny fitoeran'ny honko manakaiky ny morondranomasina no mandrisika loatra ny governemanta sy ny mpampivelatra toekarena, izay mailaka hanadio ny lalana sy hioty ny vokatry ny hotely manamoron-dranomasina sy fananana mifaka hafa.
Nanazava i Patrícia Toscano, nizotra nankany amin'ny malecón indray takariva niaraka tamin'ny Yolanda rahavaviny sy Alejandra ary Aracely namany :
La gente, y sobretodo los jovenes, están tratando de salvar el manglar. El gobierno nos mintió. La destrucción que dejaron es una desgracia. Día y noche, los voluntarios se mueven para salvar el medio ambiente, no sólo en Cancún sino en todo México.
Miezaka ny hanavotra ilay alan-konko ny olona, indrindra fa ny tanora. Nandainga taminay ny governemanta. Fahafaham-baraka ny fahasimbana navelan'izy ireo. Mandeha mankany andro aman'alina ny mpanolo-tena hanavotra ny tontolo iainana, tsy ny avy ao Cancun ihany fa ny manerana an'i Meksika.
Patrícia Toscano (afovoany havanana), miaraka amin'ny rahavavy Yolanda sy ireo namana Alejandra sy Aracely, manango-tsonia hatolotra ny fitsarana hiarovana ny alakonkon'i Tajamar. Saripika: Danica Jorden
“Tia mihazakazaka tsy taitra ao aho,” hoy ny fanazavan'i Kemel Farjat, mpandraharahan'ny fananana mifaka ao amin'ny distrikan'ny hotely fandraisam-bahiny. “Tanatin'ny alina ry zareo no nanaisotra izany rehetra izany. Hanaovana inona? Tsenambarotra hafa koa!” Nanampy haingana i Farjat, “Saingy hiverina io.”
Isaorana indrindra ny mpiambina sy ny mpikatroka hafa, ny olom-pirenena sy ny vondron-tanora, eo am-piarovana azy ny faritra ary mahazo alalana hiverina amin'ny laoniny. Nisy vano hita tao amin'ny lalana manavatsava ilay ala mahafinaritra, ary nisy vorona mavo mamirapiratra nisidina tao anatin'ny faritra voafety tariby, raha nitsambikina haingana tamin'ny tatatra ny iguana [karazana tarondro be] miloko volombatolalaka sy fotsy toro rambo.
vorona an-tanimafana miverina ao amin'ny alakonkon'i Tajamar. Saripika: Danica Jorden
Misy ny fanantenana. Araho amin'ny alalan'ny Twitter ny fitetezana hamerenana amin'ny laoniny ny alakonkon'i Tajamar :
Visiten Malecón #Tajamar y ÚNANSE. Juntos #salvemostajamar https://t.co/tbG0dl0shC pic.twitter.com/ZlctYzJBL9
— SalvemosTajamar (@salvemostajamar) 10 March 2016
Tsidiho ny Malecón Tajamar ary MIARAHA AMINAY. Miaraka isika hamonjy an'i Tajamar